nepalnews, Author at Nepal News - Latest News from Nepal - Page 30 of 556
nepalnews	 Oct 10, 2017 0
रियल मड्रिडका सुपरस्टार ग्यारेथ बेलको मुलुक वेल्स सन् २०१८ मा रुसमा हुने विश्वकप फुटबलमा छनोट हुन असफल भएको छ । जेम्स म्याकलिनको गोलको सहयोगमा जित हासिल गर्दै रिपब्लिक अफ आयरल्याण्ड भने छनोट चरणको प्लेअफमा पुगेको छ । कार्डिफ सिटी रंगशालामा…
महोत्तरी २४ असोज । महोत्तरीको बर्दिवासमा डेंगु परीक्षण गर्ने किटको अभाव भएको छ ।बर्दिवासस्थित बर्दिवास अस्पतालमा डेंगु रोग परीक्षण गर्ने किटको अभाव भएको हो । असोजको पहिलो सातादेखि डेंगुबाट ८८ जना भन्दा बढी विरामी परेका छन् । बर्दिवास…
काठमाडौं, २४ असोज । सरकारले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै म्यादी प्रहरीको भर्ना आह्वान गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै ९८ हजार २ सय ६८ म्यादी प्रहरीमा भर्ना आह्वान गरेको हो ।…
nepalnews	 Oct 9, 2017 0
काठमाडौं, असोज २३। आशन्न प्रतिनिधिसभाको चुनावमा ६०–४० प्रतिशतको भागवण्डाका लागि सैद्धान्तिक सहमति गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रवीच कुन जिल्लामा कति सीट लिने भन्ने रस्साकस्सी सुरु भएको छ । एमालेले राजपाका विद्रोही नेता र नयाँ शक्तिलाई…
काठमाडौं, असोज २३। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनको दिनदहाडै गोली प्रहार बाट हत्या भएको छ । राजधानीको व्यस्त बानेश्वरको खरिबोटमा सोमबार गौचनको गोली प्रहार बाट हत्या भएको हो । गोली लागेर घाइते भएका गौचनको उपचारको…
नायव सुब्बा घुस लिँँदै गर्दा पक्राउ परे
काठमाडौं, असोज २३। जिल्ला अदालत काभ्रेका नायव सुब्बा राजेन्द्र खत्री घुस लिँँदै गर्दा पक्राउ परेका छन् । सेवाग्राहीसँग रकम मागेको सूचनाका आधारमा गएको अख्तियारको टोलीले खत्रीलाई १ लाख २५ हजार घुस लिँदै गर्दा पक्राउ गरेको हो ।उनलाई धुलिखेल…
मनले खायको मन्त्रालय पाए राप्रपा सरकारमा जाने, चुनावी तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने !
काठमाडौं, असोज २३ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आज पार्टी कार्यालय धुम्बराहिमा बसेको बैंठकमा उपयुक्त मन्त्रालय पाए सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो ।…
भ्रष्टाचारीलाई बचाउने आदेश विरुद्ध डा. केसीको कडा चेतावनी
काठमाडौँ २३असोज । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि आमरण अनशन बस्दै आएका चिकित्सक गोविन्द केसीले पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचार आरोपितलाई बचाउनेगरी फैसला आउन थालेको भन्दै न्यायपालिकाविरुद्ध कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।…
उडिरहेको जहाजभित्रै एक महिलाले बच्चा जन्माईन
काठमाडौं २३ असोज । मुगुको ताल्चा विमानस्थलबाट नेपालगन्ज आइरहेको नेपाल एयरलायन्सको जहाजभित्र एक महिलाले बच्चाको जनम दिएकी छन्। आकाशमा उडिरहेको अवस्थामा छाँयानाथ रारा नगरपालिका २ की २२ वर्षीया मायादेवी भामले छोराको जन्म दिएकी हुन्। ताल्चा…
ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि ट्रायलमा रमिताः कतै निःशुल्क, कतै सशुल्क
काठमाडौं २३ असोज । यदि ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि ट्रायल दिन एकान्तकुनास्थित सुजुकी ड्राइभिङ सेन्टरमा जानुभयो सवारी प्रयोग गरे वापत अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ । तर, अन्य सेन्टरहरुमा ट्रायल दिँदा यो रकम लाग्दैन । यातायात व्यवस्था विभागबाट…